ဗွီ-၂ ဒုံးပျံ - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၂,၅၀၀ kg (၂၇,၆၀၀ lb)
၁၄ m (၄၅ ft ၁၁ in)
၁.၆၅ m (၅ ft ၅ in)
၁,၀၀၀ kg (၂,၂၀၀ lb) Amatol
၃.၅၆ m (၁၁ ft ၈ in)
၃,၈၁၀ kg (၈,၄၀၀ lb) of 75% ethanol and 25% water + ၄,၉၁၀ kg (၁၀,၈၂၀ lb) of liquid oxygen
၃၂၀ km (၂၀၀ mi)
၈၈ km (၅၅ mi) maximum altitude on long range trajectory, ၂၀၆ km (၁၂၈ mi) maximum altitude if launched vertically.
၁,၆၀၀ m/s (၅,၂၀၀ ft/s)
၅,၇၆၀ km/h (၃,၅၈၀ mph)
၈၀၀ m/s (၂,၆၀၀ ft/s)
၂,၈၈၀ km/h (၁,၇၉၀ mph)
ဗွီ-၂ ဒုံးပျံ (ဂျာမန်: Vergeltungswaffe 2, i.e. retaliation weapon 2), နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာအမည် Aggregat-4 (A4) သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစောပိုင်းကာလတွင် အထူးသဖြင့် လန်ဒန်မြို့၊ ထို့နောက် အန်တွပ်မြို့များကို ပစ်ခတ်ရန် ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် တီထွင်ခဲ့သော တာဝေးပစ်ဒုံးပျံဖြစ်သည်။ လောင်စာရည်တွန်းအားပေးဒုံးပျံသည် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးသောအဝေးပစ် စစ်သုံးလက်နက်နှင့် အာကာသသို့ ပထမဆုံးရောက်သော လူလုပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ခေတ်မီ ဒုံးပျံအားလုံး၏ ဖခင်ဖြစ်ကာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆိုဗီယက်ယူနီယံတို့ အသုံးပြုသော အာကာသ စီမံကိန်းများအထိ ပါဝင်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း အမေရိကန်၊ ဗြိတိသျှ၊ ဆိုဗီယက်တို့သည် ဗွီ-၂ ဒုံးပျံ၏ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကို ရရှိရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် စက္ကူညှပ်စစ်ဆင်ရေး, Operation Osoaviakhim, Operation Backfire အစရှိသော စစ်ဆင်ရေးများဖြင့် ဒုံးပျံအားတီထွင်သည့် ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်များကို ဖမ်းဆီးရန်လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၄၊ စက်တင်ဘာမှစတင်၍ ဂျာမန်တပ်များသည် မဟာမိတ်ပစ်မှတ်များ၊ အများအားဖြင့် လန်ဒန်မြို့၊ ထို့နောက်အန်တွပ်မြို့နှင့်လီဂဲမြို့များသို့ ဗွီ-၂ ဒုံးပျံပေါင်း ၃,၀၀ကျော်ပစ်လွှတ်ခဲ့သည်။ ဘီဘီစီ၏ ၂၀၁၁ စာရင်းများအရ စစ်သားနှင့်အရပ်သား ၉,၀၀၀ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး ချွေးတပ်သားနှင့်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း ၁၂,၀၀၀ကျော်မှာ ယင်းလက်နက်များ ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းများတွင် ခိုင်းစေမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။
↑ 'Long-range' in the context of the time. See NASA history article. Archived7January 2009 at the Wayback Machine.
↑ Zaloga၊ Steven (2003)။ V-2 Ballistic Missile 1942–52။ Reading: Osprey Publishing။ p. 3။ ISBN 978-1-84176-541-9။
↑ NOVA science programme(s). Sputnik Declassified. Public Broadcasting Service (PBS). 2008.
↑ "Am Anfang war die V2. Vom Beginn der Weltraumschifffahrt in Deutschland". In: Utz Thimm (ed.): Warum ist es nachts dunkel? Was wir vom Weltall wirklich wissen. Kosmos, 2006, p. 158, ISBN 3-440-10719-1.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗွီ-၂_ဒုံးပျံ&oldid=685131" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။